Amakamelo Okuqeqesha eGurgaon - ITS Tech School
Amakamelo Wokuqeqesha eGurgaon Ukuqasha
I-innovative Technology Solutions inehhovisi lekhanda I-Gurgaon. ITS ikakhulukazi ku-IT ukuqeqesha, amakamelo okuqeqesha kanye nenkampani yokuhlinzeka ngezixazululo. ITS Tech School inikeza Igumbi lokuqeqesha e-gurgaonukuqeqeshwa kwezinkampani ngezemvelo ecebile yokufunda kanye nengqalasizinda yethu ye-state-of-an-art kanye nezindawo zokugcina eziphezulu njengoba kunesidingo sokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe ezinkampani.
Indawo yokuqeqesha ekuqashweni eGurgaon
ITS ibe ne-multiple amakamelo okuqeqesha eGurgaon ie eSouth City 1, Star Mall kanye noMkhakha - 14 oseduze neHuda City Centre, Iffco Chowk kanye neMetro Road iziteshi. ITS isine-13 amakamelo okuqeqesha aqasha eGurgaon futhi angabamba abahlanganyeli be-270 ngosuku olulodwa. ITS Indawo yokuqeqesha e-Gurgaonzihlonywe ngemishini ephezulu, iphrojekti ephezulu ephakanyisiwe kanye nebhodi elimhlophe.
Indlu ifakwe iphrojekitha
Ibhodi elimhlophe elinamamaki
100% isipele amandla
Isikhathi se-02 itiye / ikhofi nge-snacks
Isidlo sasemifino e-buffet
I-Intanethi - Yebo, ukuxhumeka komgwaqo wokuqashisa okusheshayo.
Amakhomphyutha - I-4 GB RAM kumishini ye-32 GB RAM iyatholakala.
Ukuxhumana kwe-Ethernet LAN / Wi-Fi
Faka imali ngokuphumelela kwakho
Ukuze Umbuzo Chofoza Lapha
I-Gurgaon yi-hub ye-Corporate kanye ne-IT yeNational Capital Region (NCR) yaseNdiya. I-Gurgaon eseduze kakhulu ne-NH-8 Express indlela, i-airport yonkana yezwe, inikezela kahle kakhulu ekuthuthukiseni ukuhweba kwezinga, indawo enhle yezinkampani. I-Gurgaon yikhungo seMNC ne-BPO, izinkampani ze-IT ezinjengalezi I-Aricent Group, IBM, EMC2, i-Microsoft, i-Oracle, i-Accenture, i-Genpact, i-TCS, i-NIIT, i-Sapient, iWipro kanye nezinkampani eziningi eziningi ezisungulwe eGurgaon. I-IS inikeza ukuqeqeshwa kwezinkampani futhi igumbi lokuqeqesha kuzo zonke izinkampani ezihamba phambili eGurgaon.
Ukuze uthole iposi yokubhuka ku info@itstechschool.com
Zonke izinketho zethu zokuhlala e-Gurgaon zinezikhala ezinamaphesenti ahlanzekile kahle anezinsizakalo zanamuhla njenge-Wi-Fi, i-Tv, i-Heater, i-backup yamandla, udokotela-ucingo lokuhlala kwakho okushelelekile.
Ihhotela Pllazio (i-4-inkanyezi)
Izakhiwo esakhiweni esiphefumulelwe izakhiwo zaseYurophu, i-Pllazio Hotel inikeza igumbi lokubhukuda lokupaka, indawo yokuzijabulisa kanye nokuzijabulisa.
700 m kusuka eHuda City Centre Metro Station & Fortis Hospital
Iphuza ibha yokuphuza emva kokudla kwakho
I-Gym & Pool Pool
Yidla e-Melange World Cuisine Restaurant.
I-Hotel Crown Plaza (i-4-inkanyezi)
Siyakwamukela endleleni entsha futhi engcono yokwenza ibhizinisi, lapho uzizwa uxhumekile ngokugcwele futhi uthola ukuphumula okungcono ebusuku.
Ukudla okusheshayo nokusha
Isihlalo sabakhubazekile esiteshini esitholakala
Isikhungo Sobuhle & Isikhungo Sosizo
IHG Imiklomelo Club
I-LAB 1 16
I-LAB 2 24
Umkhakha we-14, i-Gurgaon-122001, i-Haryana, e-India.
I-LAB 1 20
I-LAB 2 40
I-LAB 3 24
I-LAB 4 32
I-LAB 5 40
I-DLF Star Mall, Umkhakha-30 Gurgaon-122001, Haryana
I-LAB 2 18
I-LAB 3 18
I-LAB 4 18